मंग्सिर २६, २०७८ आइतबार 34
डलरको मूल्य १७ महिनाकै उच्च
नेटिजन नेपाल by नेटिजन नेपाल मंसिर २६, २०७८
विदेश जानेले दुई सय अमेरिकी डलरभन्दा बढी साट्न नपाउने
काठमाडौँ, २६ मङ्सिर। अमेरिकी डलरको विनिमय दर पछिल्लो १७ महिनाकै उच्च रहेको छ। दिनप्रतिदिन डलर बलियो हँुदै जाँदा भारतीय मुद्रा र नेपाली रुपैयाँ भने कमजोर बन्दै गएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै सुरक्षित मुद्रा ठानिने भएकाले अधिकांश मुलुककले रिजर्भ राख्ने गरिएकाले अमेरिकन डलरको माग बढेको र पछिल्ला दिनमा मूल्य अकाशिएको विज्ञहरूको भनाइ छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव आयात महँगिने र मूल्यवृद्धिमा चाप पर्ने औंल्याइएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबारका लागि एक अमेरिकी डलरको बिक्री विनिमय दर मंसिर २५ गते १ सय २१ रुपैयाँ ५३ पैसा पुगेको छ। यस्तै सो दिनको खरिद दर भने १ सय २० रुपैयाँ ९३ पैसा पुगेको छ। अमेरिकी डलरको विनिमय दर पछिल्लो १७ महिनाकै उच्च रहेको छ। दिनप्रतिदिन डलर बलियो हँुदै जाँदा भारतीय मुद्रा र नेपाली रुपैयाँ भने कमजोर बन्दै गएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै सुरक्षित मुद्रा ठानिने भएकाले अधिकांश मुलुककले रिजर्भ राख्ने गरेकाले अमेरिकन डलरको माग बढेको र पछिल्ला दिनमा मूल्य अकाशिएको विज्ञहरूको भनाइ छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव आयात महँगिने र मूल्यवृद्धिमा चाप पर्ने औंल्याइएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबारका लागि एक अमेरिकी डलरको बिक्री विनिमय दर मंसिर २५ गते १ सय २१ रुपैयाँ ५३ पैसा पुगेको छ। यस्तै सो दिनको खरिद दर भने १ सय २० रुपैयाँ ९३ पैसा पुगेको छ। यसको अघिल्लो दिन अर्थात्् मंसिर २४ गते बिक्रीदर १ सय २१ रुपैयाँ १४ पैसा पुगेको थियो ।
यस्तै सो दिनको खरिद दर भने १ सय २० रुपैयाँ ५४ पैसा थियो। सो बिक्री दर भने २०७७ असार ९ गतेपछिको अर्थात् १७ महिनाकै उच्च हो। सो अवधि अघि अमेरिकी डलरको बिक्रीदर अधिकतम १ सय २१ रुपैयाँ ३४ पैसासम्म पुगेको थियो। यस्तै खरिद दर पनि १२१.९४ रुपैयाँ थियो। यसपछि भने घटेको थियो। डलरको मूल्य क्रमशः बढ्दै गर्दा नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यन भएको छ।
यद्यपि यसैबीचमा डलरको दरमा उतारचढाव आए। नेपाली मुद्रा बलियो पनि देखियो। किनभने २०७७ मंसिर १८ मा खरिद दर १२०.६५ र बिक्रीदर १२१.९४ रुपैयाँ पुगेको थियो। यस्तै गत असोजको पहिलो साता एक अमेरिकी डलर विनिमय दरको १ सय १७ देखि १ सय १८ रुपैयाँ हाराहारीमा रह्यो। यतिबेला भने डलर कमजोर अर्थात् अवमूल्यन भएको थियो। तर यो अवस्था धेरै समय रहेन। किनभने गत असोज अन्तिम सातादेखि फेरि यस्को बिक्रीदर १ सय २१ रुपैयाँ नाघ्यो। गत असोज २७ मा एक डलरको विनिमय दर १ सय २१ रुपैयाँ १२ पैसा पुग्यो । तर अहिले सो दरभन्दा पनि बढी पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
Prevजन्ती बाेकेकाे बस दुर्घटना : चालककाे मृत्यु, आठ जना गम्भीर घाइते
Nextकोरिया जाने श्रमिक मर्कामा, व्ययभार थपिएसँगै बढ्यो कोरिया जाने लागत ! किन बढ्यो लागत हेर्नुहोस्?
कक्षा कोठा भित्र नै शिक्षक र छात्रा यस्तो हर्कत गर्दै गरेको अवस्थामा भेटीए !
यसरी लेख्न सकिन्छ थेसिस (पाठ १ देखि २९ सम्म) शेयर गरेर सबैमाझ पुर्‍याऔं